Nhọrọ efu 10 maka Okwu maka Mac | Nzukọ mkpanaka
Ignacio Sala | 14/10/2021 22:00 | Mac, Sistemụ arụmọrụ
Microsoft Okwu adịla mgbe niile ngwa kachasị mma iji mepụta akwụkwọ ederede dị anya n'azụ ndị na -emegide ya, ndị na -emegide ya, ebe ọ bụ na ha enweghị otu akụ dị ka ụlọ ọrụ dịka Microsoft, enweghị ike ma ọ gaghị enwe ike ịchụkwudo.
Otú ọ dị, Nhọrọ ndị ọzọ n'efu maka Okwu maka Mac.
2 Akwụkwọ Google
6 Na -ede Ihe
10 Office WPS
Peeji abụrụla nke Nhọrọ ọzọ nke Apple na -enye ndị ọrụ macOS, ngwa nke na -agbakwunye ọtụtụ ọrụ, ọrụ dịlarị na Okwu ruo ọtụtụ afọ.
Ngwa Pages, na -eji usoro nke ya imepụta na chekwaa akwụkwọ, usoro nke na-adabaghị na ngwa ndezi ederede ederede ọ bụla, yabụ na ọ bụghị ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na akwụkwọ ndị ị mepụtara ga-ekekọrịta n'etiti ndị ọrụ ndị ọzọ na-abụghị Mac.
Ọ dabara nke ọma, site na Peeji anyị nwere ike bupụ akwụkwọ anyị mepụtara n'ụdị ndị ọzọ dakọtara, dị ka .docx, usoro nke Okwu Microsoft na -eji.
N'ọtụtụ oge, anyị agaghị ezute nsogbu ọ bụla na ntụgharị, agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ bụ akwụkwọ dị mgbagwoju anya, enwere ike imetụta ihe owuwu ahụ na -amanye anyị idezi ya ma emechaa.
Peeji, dị ka Nọmba na Isi okwu, ngwa ndị ọzọ nke bụ akụkụ nke iWork (Apple's Office) dị maka gị budata n'efu, dị ka ụdị maka iOS na iPadOS.
Nhọrọ ọzọ na -atọ ụtọ kpamkpam maka Okwu na Mac bụ Google Docs. Google docs, n'ezie ọ bụghị ngwa mana ọ bụ ọrụ weebụ Anyị nwere ike ịnweta ya site na ihe nchọgharị ọ bụla, yabụ anyị nwere ike iji ya na sistemụ arụmọrụ ọ bụla.
Ebe ọ bụ ngwaahịa Google na -arụ ọrụ site na weebụ, ọrụ nke Google Documents ọ ga -adị ngwa ngwa ma ọ bụrụhaala na anyị na -eji Google Chrome, Ihe nchọgharị Google ma ọ bụ ihe nchọgharị weebụ ọzọ dabere na Chromium, dị ka Microsoft Edge Chromium.
Ọnụ ọgụgụ atụmatụ dị na Google Docs ọ bụ oke oke nke anyị nwere ike ịhụ na ibe, agbanyeghị, ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị ọrụ niile chọrọ nhazi okwu na enweghị ọrụ ndị ọzọ.
Dị ka Peeji, Google Docs na -eji usoro nke ya, usoro nke dakọtara na Microsoft Okwu ma ọ bụ Peeji Apple, yabụ anyị ga -agbanwerịrị faịlụ ahụ ka ọ bụrụ usoro akwadoro tupu anyị ekesa ya na ndị ọzọ na -ejighị Google Docs.
Otu akụkụ kacha njọ na Google Docs bụ interface onye ọrụ, ngwa ọrụ na -enweghị atụ na na ọtụtụ oge, akara ngosi nke ọrụ na -eduhie anyị.
Ọ bụrụ na azịza nke akwụkwọ Google anaghị enye gị afọ ojuju mana na -amasị gị echiche nke ịrụ ọrụ site na ihe nchọgharị, ị kwesịrị ịnwale Office.com.
Site na Office.com anyị nwere ike ịnweta ụdị nke Okwu, Excel, PowerPoint na ndị ọzọ nwere onwe ha kpamkpam mana ọ na -arụ ọrụ nke ọma, opekata mpe maka imirikiti ndị ọrụ ndị mkpa ha bụ imepụta akwụkwọ ederede na -enweghị nsogbu.
Akwụkwọ niile anyị mepụtara site na Office.com, anyị nwere ike chekwaa ha na akaụntụ OneDrive anyị, jikọtara na akaụntụ ahụ anyị chọrọ ee ma ọ bụ ee iji nweta ikpo okwu a, ma ọ bụ budata akwụkwọ na draịvụ ike anyị.
Ọ bụrụ na ị nwekwara mkpa mepụta akwụkwọ oge ụfọdụ ma ọ bụ oge niile na ama iPhone ma ọ bụ gam akporo gị, Microsoft na -enye anyị ngwa Office, ngwa nke, dị ka webụsaịtị Office.com, na -enye anyị ohere ịmepụta Okwu dị mfe, Excel na PowerPoint, na -enweghị frills anyị nwere ike ịhụ na ụdị dị n'okpuru ndenye aha.
FreeOffice A maara ya dị ka ụzọ kachasị mma mepere emepe na ụlọ Microsoft Office. N'ịbụ onye mepere emepe, ọ bụ n'efu yana enwere ya n'ọtụtụ ọnụọgụ.
Ọ bụrụ na ị marala ochie onye ọrụ Microsoft Office (tupu rịbọn), ọ gaghị ewe gị oge ịmara LibreOffice. N'adịghị ka ngwa Google, ịchọghị njikọ ịntanetị iji LibreOffice.
LibreOffice na -enye ndakọrịta na nyiwe nchekwa niile, na -enye ohere mekọrịta faịlụ site na Google Drive ma ọ bụ OneDrive wee dezie ya ozugbo na LibreOffice.
LibreOffice na -arụkwa ezigbo ọrụ ma a bịa n'ịhazi faịlụ mbubata akwụkwọ Microsoft Office, gụnyere mpempe akwụkwọ Excel dị mgbagwoju anya nke na -enye mgbagwoju anya ka ukwuu mgbe a na -atụgharị ha n'ihi ọrụ ha nwere ike itinye.
Otu n'ime Nhọrọ ndị ọzọ amachaghị na Okwu bụ Bean, onye nrụpụta okwu maka macOS, dị mfe mana nke ahụ na -enye anyị ọrụ ndị anyị nwere ike ịchọ n'oge ọ bụla iji mepụta akwụkwọ ederede.
Ọdịiche ahụ dị nfe ma dịkwa mfe, mana ọ na -enye anyị ihe zuru oke dị mkpa iji mepụta akwụkwọ na -enweghị nsogbu. Ọ naghị enye anyị ohere ịgbakwunye nkọwa ala ala ma ọ bụ itinye ụdị na ya na Okwu adabaghị.
agwa na-enye anyị ruo ụdị Mac nwere PowerPC, yabụ ọ bụrụ na ị nwere Mac ochie nke ịchọrọ iweghachi ndụ wee nye ya ihe ụfọdụ, ịnwere ike iji ya dị ka onye nrụpụta okwu na ngwa a.
Na -ede Ihe
Nhọrọ ọzọ na -atọ ụtọ n'efu na Okwu yana yiri Bean mana nwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ anyị na -ahụ ya na Growly Write, ngwa nwere imewe yiri ibe ebe nhọrọ ịhazi akwụkwọ ahụ dị na kọlụm dị n'akụkụ aka nri nke ngwa ahụ.
Site n'iji Edemede Edemede anyị nwere ike mepụta akwụkwọ dị iche iche nwere ogidi, isiakwụkwọ nwere atụmatụ dị iche iche, tinye ihe onyonyo n'akụkụ ọ bụla nke ederede, tebụl, ndepụta, njikọ, gbakwunye ókèala dị mfe ma dị mgbagwoju anya ...
Ngwa a na-enye anyị ohere mbubata Okwu akwụkwọ na n'ụdị RTF, TXT na ibe n'ụdị HTML. Mgbe ị na -echekwa akwụkwọ, anyị nwere ike mbupụ ya na ePub, RTF, ederede doro anya ...
Edemede Growly dakọtara na macOS 10.8 ma ọ bụ karịa ma anyị nwere ike ibudata ya na nke a njikọ.
Ommwriter bụ ngwa maka ndị chọrọ dee na -enweghị ndọpụ uche ọ bụla. Ọ dabere na gburugburu eke nke na -ekewa uche anyị na ihe ndọpụ uche site n'ịmepụta ahịrị kpọmkwem n'etiti echiche na okwu anyị.
Ngwa a lekwasịrị anya na ndị na -ede ihe oge niile ma na -achọ izere ụdị ihe ndọpụ uche niile, yabụ abụghị ezigbo nhọrọ imepụta akwụkwọ ederede.
Iji nyere ndị ọrụ aka ilekwasị anya n'ide ihe, Ommwriter na -enye anyị ihe dị iche akwụkwọ ahụaja, ọdịyo na egwu ụda site na ịpị igodo ọ bụla (ma ọ bụrụ na ịnweghị keyboard igwe).
Ommwriter dị maka gị budata n'efu. Ụdị n'efu gụnyere akwụkwọ ahụaja 3, egwu egwu atọ na ụda igodo atọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwekwu nhọrọ, ị ga -agabiga na igbe.
NeoOffice bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nke ahụe dabere na OpenOffice na LibreOffice nke anyị nwere ike lelee, dezie ma chekwaa dọkụmentị na Microsoft Okwu, OpenOffice na LibreOffice.
NeoOffice na -enye anyị ụfọdụ ọrụ ndị adịghị na ngwa nke ha dabere na ya, dịka:
Ụkpụrụ ọchịchịrị ala ala
Dezie akwụkwọ ozugbo site na iCloud, Dropbox na draịva netwọkụ.
Nyochaa ụtọ asụsụ site na iji ndekọ macOS.
Ngwa a dị kpamkpam n'efu maka nbudata ma na -enye anyị ọnụọgụ nhọrọ nke na -eme ka ọ bụrụ nhọrọ kachasị mma maka Okwu, karịa OpenOffice na LibreOffice site na ịnye ọrụ macOS naanị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ imekota oru ngo a, ị nwere ike iji onyinye nke dollar 10 mee ya.
Openoffice bụ ngwa ọzọ mepere emepe nke egosipụtara dị ka ezigbo ụzọ ọzọ maka Office maka ndị ọrụ niile nwere mkpa dị mkpa mgbe ha na -ekepụta akwụkwọ ederede, ihe ngosi, akwụkwọ mgbasa ozi, ọdụ data
N'ime Ọfịs mepere emepe, anyị na -ahụ ngwa onye edemede, ihe ọzọ dị na Okwu Microsoft nke kacha yie ngwa a n'ihe gbasara ọrụ, n'agbanyeghị na enwereghị onwe ya kpamkpam. N'agbanyeghị enwetaghị nkwado gọọmentị, a kwụsịrị ya, ọ na -arụ ọrụ na -enweghị nsogbu ọ bụla na Mac ọ bụla.
Office WPS bụ otu ngwa kpam kpam n'efu na emeghe nke anyị nwere ike iji mepụta akwụkwọ ederede niile, akwụkwọ mgbasa ozi, ihe ngosi, ọdụ data, akwụkwọ pdf, gbanwee akwụkwọ n'ụdị ọzọ, dezie onyonyo ...
Akwụkwọ niile anyị ji ngwa ndị a mepụta, anyị nwere ike bupụ ha n'enweghị nsogbu na usoro Okwu .ihe
Ngwa onye ọrụ WPS Office dị mma dị ka nke Office nyere na ụdị ochie, yabụ ọ bụrụ na ị maara ya, ị ga -eji ngwa a n'efu n'efu enweghị ụdị ndenye aha ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Nhọrọ 10 n'efu maka Okwu maka Mac